Mpanamboatra fandriana mpitsabo mpanampy sy jiro | Webian
Fandriana mpitsabo mpanampy elektrika dimy
Ity fandriana ity dia fandriana mpitsabo mpanampy miasa dimy. Ny fomba an-trano dia mety amin'ny hopitaly famoronana trano sy trano fitaizana be antitra. Izy io dia afaka mahatsapa ny marary ao an-trano sy milamina.
Ity fandriana ity dia mandray fiakarana mitsangana, ary tsy misy famindran-toerana mandritra ny fizotra, izay mampihena ny habaka nozahana. Ny famoahana famoretana eo an-damosina dia mampihena ny fametahana eo anelanelan'ny fandriana sy ny lamosina mandritra ny fiakaran'ny lamosina.
Ary ny takelaka feno mpiambina feno varavarana manokatra ny sisiny dia mampihena ny risika hianjeran'ireo marary eo am-pandriana.
Loha sy tongotra ny hazo mafy (hazo terebinta), fomban'ny trano
Guardrail plug-in efatra miaraka amina rafitra fanidiana plug miaraka amina famolavolana varavarana
volavola net, breathable kokoa
125mm mpitaingin-tsoavaly mangina miaraka amina frein,
backrest, legrest, adjustable height, trendelenburg and reverse trendelenburg
Marika L&K na marika malaza eto an-toerana
Zoro fampiakarana miverina
Zoro fananganana tongotra
Trendelenburg sy trendelenburg mivadika
Ny sakany feno
Kidoro, tsato-kazo IV, farango kitapon-drano, batery
Fandriana hopitaly miasa telo
Halavany: 2090mm (farafara fandriana 1950mm) ， Sakany: 960mm (farafara fandriana 900mm)
Haavony: 340mm ka hatramin'ny 640mm (farafara fandriana hatramin'ny gorodona, tsy avela ny hatevin'ny kidoro)
Fialana sasatra mampiakatra zoro 0-75 °
Ny fitsanganan'ny tongotra miala ny zoro 0-45 °
Famoronana firafitra: (toy ny sary)
1. Takelaka fandriana
2. Foot Footboard
3. Sarin'ny fandriana
4. tontonana aoriana
5. tontonana tongotra
6. Trano fiambenana
Izy io dia mety amin'ny fikolokoloana sy ny fanasitranana ny marary.
1. Casters fandriana
Apetraho eo ambany ny farafaran'ny fandriana, vakio ny casters ary apetraho ao anaty tongotra ny casters, avy eo apetaho amin'ny tany ny fandriana.
2. Saron-doha sy tabilao fandriana
Apetraho ny takelaka sy ny takelaka, amboary ny visy amin'ny alàlan'ny lavaky ny takelaka / takelaka ary ny farafara fandriana, afatory amin'ny voanjo.
3. Trano fiambenana
Ampidiro eo amin'ny fotony ny mpiambina, avy eo afatory ny visy amin'ny lafiny roa amin'ny mpiambina.
Tsindrio ny bokotra ▲, mampiakatra ny sandam-pandriana, ny zoro max 75 ° 5 5 °
Tsindrio ny bokotra ▼, mandrotsaha ny fisorinan'ny fandriana mandra-pahatonga fisaka
Tsindrio ny bokotra ▲, ny fiakarana ankapobeny, ny haavon'ny haavon'ny fandriana dia 640cm
Tsindrio ny bokotra ▼, ny fitetezana ankapobeny, ny haavon'ny ambany indrindra amin'ny fandriana dia 340cm
Tsindrio ny bokotra ▲, mampiakatra ny habibiana am-pandriana, ny zoro max 45 ° ± 5 °
Tsindrio ny bokotra ▼, ny latsa-paka any am-pandriana mandra-pahatongan'ny fisokafana
2. Ny varavaran'ny mpiambina: sokafy ny bokotra mena amin'ny varavarana, afaka mivadika malalaka ny varavarana, manidy ny bokotra mena, tsy afaka mihetsika ny varavarana.
3. Esory ny mpiambina: Vahao ny visy amin'ny lafiny roa amin'ny mpiambina, avy eo esory ny mpiambina.
Torolàlana amin'ny fampiasana azo antoka
1. Hamarino tsara fa mifamatotra mafy ny tadin'ny herinaratra. Hamarino tsara ny fifandraisana azo antoka an'ny mpanara-maso.
2. Tsy mahazaka mitsambikina eo am-pandriana ilay olona. Rehefa mipetraka eo amin'ny solaitrabe ny marary na mijoro eo am-pandriana dia aza afindra ny fandriana.
3. Rehefa mampiasa ny mpiambina dia afatory mafy.
4. Amin'ny toe-javatra tsy misy mpiambina dia tokony tazonina amin'ny haavon'ny ambany indrindra ny fandriana hampihenana ny mety haratra raha mianjera avy eo am-pandriana ilay marary mandritra na ivelan'ny fandriana.
5. Casters tokony hidin-trano mahomby
6. Raha ilaina ny mamindra ny farafara, voalohany, esory ny tsipika herinaratra, soloina ny tariby mpanera herinaratra, ary ahidiana ny tranom-baravarana sy ny varavarana, hisorohana ny marary amin'ny fizotran'ilay fianjerana sy ratra. Avy eo avotsory ny freins casters, farafaharatsiny olona roa no miasa ny mihetsika, mba tsy ho voafehy ny lalana amin'ny fizotran-javatra, ka hiteraka fahavoazana amin'ny faritra simika, ary hanimba ny fahasalaman'ny marary.
7. Tsy avela hisoroka ny simba amin'ny vala ny mpiambina.
8. Aza afindra amin'ny alàlan'ny lalana tsy mitovy ny fandriana, raha sanatria misy fahasimbana ao anaty caster.
9. Aza manindry bokotra mihoatra ny roa mandritra ny fotoana iray hampandehanana ny fandriana ara-pahasalamana elektrika, mba tsy hampidi-doza ny fiarovana ny marary
10. Ny entana miasa dia 120kg, ny lanjan'ny enta-mavesatra dia 250kgs.
1. Hamarino tsara raha ny fehiloha sy ny solaitrabe dia nifatotra mafy tamin'ny fefin'ny fandriana.
2. Zahao tsy tapaka ny casters. Raha tsy tery izy ireo dia afatory indray izy ireo.
3. Ataovy izay hamonoana ny herinaratra mandritra ny fanadiovana, famonoana otrikaretina ary fikojakojana.
4. Ny fifandraisana amin'ny rano dia hitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny tsindry herinaratra, na koa ny fikororohana herinaratra, azafady mampiasa lamba maina sy malefaka hamafana
5. Ny ampahany vy miharihary dia harafesina rehefa tratry ny rano. Hamafa amin'ny lamba maina sy malefaka.
6. Alefaso amin'ny lamba maina sy malefaka ny plastika, kidoro ary ireo faritra hafa amin'ny firakotra
7. Misitrika sy malemy ny menaka, ampiasao ny lamba maina manosika izay milentika ao anaty detergent tsy miandany hamafana.
8. Aza mampiasa menaka akondro, lasantsy, solitany ary solvents hafa miovaova ary savoka manakotsa, spaonjy, borosy sns.
9. Raha misy tsy fahombiazan'ny masinina dia esory avy hatrany ny famatsian-jiro, ary mifandraisa amin'ny mpivarotra na mpanamboatra.
10. Ireo mpiasa hikarakara tsy matihanina dia tsy manamboatra, manova, mba hisorohana loza.
Ireo vokatra fonosana dia azo entina amin'ny fomba fitaterana ankapobeny. Mandritra ny fitaterana, azafady mba jereo tsara ny fisorohana ny masoandro, ny orana ary ny lanezy. Aza atao fitaterana amin'ny akora misy poizina, manimba na manimba.
Ny vokatra fonosana dia tokony hapetraka ao anaty efitrano maina sy misy rivotra tsara tsy misy fitaovana manimba na loharano mafana.
Teo aloha: Fandriana hopitaly miasa dimy miaraka amin'ny ambaratonga mavesatra
Manaraka: Fandriana hopitaly miasa telo
Fandriana fitsaboana elektrika 5 miasa
Fandriana hopitaly fiasa dimy misy lanjany ...
Fandriana hopitaly miasa dimy